နားအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် Disposable စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖုံး
E9003CP သဟဇာတ ECG Leadwires EE029A3I-01
Disposable Non-invasive EEG အာရုံခံ B0054A
IBP Adapter ကို Cable ကို X0104B
ဆီလီကွန်လက်စွပ်အမျိုးအစား SpO2 အာရုံခံကိရိယာ
SpO2 အာရုံခံကိရိယာတိုးချဲ့မှု Cable ကို S0549CS-L ကို
မြေပြင်အ Pad နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး
Product Name:ECG နှာမောင်း Cable ကိုနှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြ
Compatible model:အားလုံးနည်း, Tru-LINK Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော SPACELABS
low profile, ထည့်သွင်းပုံသွင်းဒင်္သို့မဟုတ်ဖြစ်တော့ connectors လျှပ်ဖမ်းယူဖို့လူနာနှစ်သိမ့်နှင့်လုံခြုံ attachment ကိုဆက်ကပ်။ အဆိုပါဒင်္ရပ်စဲရဲ့ Ergonomics,
teardrop ဒီဇိုင်းကိုလူနာအဆုံး connector ကိုမှာ tangling လျော့နည်းစေသည်။
1.Snap စတိုင်နဲ့ Clip စတိုင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ခဲဝါယာကြိုး connectors ၏ 2.Various အမျိုးအစားများကိုတိုက်ရိုက်မူရင်း ECG cable ကိုနှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုင်ပါသည်။
3.Med-link ကိုပြန်သုံးနိုင်သော ECG ခဲဝါယာကြိုးများ FDA က, အီး, CFDA အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဂျာကင်အင်္ကျီ၏ 4.The ပစ္စည်းများအများအားဖြင့်, ပျော့နှင့်အဆင်ပြေ TPE ဖြစ်ကြသည်။
5.Splitters ဆေးထိုးတန်ဆာအားအကြမ်းခံ, ရှည်သောအသက်ဖြစ်ကြသည်။
High-အပူချိန်ပိုးသတ်ဖြစ် 6.Can, ထပ်တလဲလဲသုံးပါ။
7.Instrument ခြမ်း connectors စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတူရိယာ၏အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။ DB9F များသောအားဖြင့်အာရုံခံကိရိယာခြမ်းမှာ connector ကိုအသုံးပြုသည်။
Med-linket ECG နှာမောင်း Cable ကိုပေးအပေါင်းတို့နှင့်အမှတ်တံဆိပ်မော်နီတာမော်ဒယ်များများအတွက်သင့်လျော်သောစေသောနိုင်ပါတယ်
ER090-5AI Mindray Datascope နိုင်ငံကူးလက်မှတ် V ကို, V12, V21 5Ld လူနာ Cable ကို, 10.5ft, အေ့ဟေ / IEC, 12pin> Mindray-5LD, 1KΩခုခံ, 0,15 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Grey က, 1pc / အိတ်
VDG023-AAI ဖိလိပ္ပုသည် 78352C, 78354C, 78834C အမွေအနှစ် HP ကမော်နီတာ, မော်ဂျူးများ
M1001A / B, M1002A / B ကို M3001A Opt ။ C12 သို့မဟုတ် Opt ။ C18 IntelliVue
Multi-အတိုင်းအတာမော်ဂျူးများ M3002A Opt ။ C12 MMS ကို X2 M8102A Opt ။ C12 MP2
Monitor M8105A Opt ။ C12 MP5 Monitor M3535A / M3536A HeartStar; 12-pin ကို ECG input ကို connector ကိုနှင့်အတူ 10-ခဲ ECG စည် cable ကို။ AAMI / IEC တံဆိပ်များပါဝင်သည်။ အရှည်: 8.9 '(2.7m); 0,22 ကီလိုဂရမ်, PVC, Cool Gray, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1949A, 1pc / အိတ်
EL040S5A အားလုံးနည်း, Tru-LINK Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော SPACELABS ပဲစင်းငုံ-LINK စတိုင်ခဲဝါယာကြိုး, 40, (102 စင်တီမီတာ), 5-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Snap, 0.089KG, TPU, Cool Gray, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: ။ 700-0007-10 1pc / အိတ်
EL024S3A အားလုံးနည်း, Tru-LINK Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော SPACELABS ။ ပဲစင်းငုံ-LINK စတိုင်ခဲဝါယာကြိုးများ, 24 ခုနှစ်, (61 စင်တီမီတာ), 3-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Snap, 0,068 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Gray, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: 700-0007-00; Yoke အမျိုးအစား: နည်း, Tru -LINK စတိုင် 1pc / အိတ်
EL009-5AI SPACELABS 90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview; 5Ld လူနာ Cable ကို, 9ft, အေ့ဟေ / IEC, က Round 17p> နည်း, Tru-LINK 5Ld, 1KΩခုခံ, 0,186 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Grey က; မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: IEC: 700-0008-07, အေ့ဟေ: 700-0008-06; VS စတိုင်ဆောင်ဘို့အ fit ။ 1pc / အိတ်
EJ051-5AI 12-pin ကိုအစိမ်းရောင် input ကို connector ကိုနှင့်အတူ 2004 ခုနှစ်အပြီး MINDRAY pm တွင်-6800, ညနေ-6000,
BeneView (T5, T6, t8), iPM စီးရီး; ECG နှာမောင်း Cable ကို, 5Ld, ယူရိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် 9ft, အေ့ဟေ / IEC, ဖြောင့်, Round12P> ယူရို, 0,172 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Gray, 1KΩခုခံ / induction, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: 0010-30-42723 1pc / အိတ်
EJ051-3AI 12-pin ကိုအစိမ်းရောင် input ကို connector ကိုနှင့်အတူ 2004 ခုနှစ်အပြီး MINDRAY pm တွင်-6800, ညနေ-6000,
BeneView (T5, T6, t8), iPM စီးရီး; ECG နှာမောင်း Cable ကို, 3Ld, 9ft, အေ့ဟေ / IEC, 12P> ယူရို, 1KΩခုခံ induction, 0,144 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Gray, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: 0010-30-42724; ယူရိုစတိုင် LeadWires များအတွက် fit 1pc / အိတ်
WESTINGHOUSE ယူရိုစတိုင်ခဲဝါယာကြိုးများအတွက် 40 (102 စင်တီမီတာ), 5-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Grabber (Clip), အားလုံးယူရို-Plug System ကိုသင့်လျော် 0,084 ကီလိုဂရမ်, Cool Gray, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ ယူရိုစတိုင် 1pc / အိတ်
EJ040C3A Mindray, Siemens, SPACELABS, BURDICK, Viggo- Spectramed (Statham), WESTINGHOUSE ယူရိုစတိုင်ခဲဝါယာကြိုးများအတွက် 40 (102 စင်တီမီတာ), 3-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Grabber (Clip), အားလုံးယူရို-Plug System ကိုသင့်လျော် 0,054 ကီလိုဂရမ်, Cool Gray, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ ယူရိုစတိုင် 1pc / အိတ်
EJ032-5AI ဖူကူ Denshi; ဖူကူ: 7100 စိတ်ရှည်မော်နီတာ; ECG နှာမောင်း Cable ကို, 5Ld, 9ft, အေ့ဟေ / IEC, က Round 12P> ယူရို 5LD, ယူရိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် 0,167 ကီလိုဂရမ်, TPU, Cool Grey က, 1pc / အိတ်
EH040C3A Datex-Ohmeda GE-ဆေးဘက် Pro1000; အားလုံး ASP-Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ASP ခဲဝါယာကြိုးများ, (102 စင်တီမီတာ) 40, 3-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Grabber (Clip), 0,0262 ကီလိုဂရမ်, Cool Gray, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ ASP, Code ကို: H ကို 1pc / အိတ်
EH010-3AI Datex-Ohmeda လူနာမော်နီတာ; 9ft ECG နှာမောင်း Cable ကို, 3Ld, အေ့ဟေ / IEC, က Round 10J> ASP 3LD, 4.7KΩခုခံ, 0.139KG, TPU, Cool Gray, ASP စတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် 1pc / အိတ်
EE029C5A-G GE--Marquette (Set –Group type Lead wires); suitable for all Multi-link(VS)- Plug System ။ , (76 စင်တီမီတာ), 5-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Grabber (Clip), 0,0756 ကီလိုဂရမ်, TPU, Yoke အမျိုးအစားအတွက် multi-Link ကို Ldwr သတ်မှတ်မည် -Group, 29: Multilink (VS), မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: E9003CE 1pc / အိတ်
EE029C3A-G GE--Marquette (Set –Group type Lead wires); suitable for all Multi-link(VS)- Plug System multi-Link ကို Ldwr သတ်မှတ်မည် -Group, (76 စင်တီမီတာ), 3-ld, အေ့ဟေ (AAMI) တွင် 29, Clip, 0,0504 ကီလိုဂရမ်, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ Multilink (VS), မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: E9003CL 1pc / အိတ်
လင်းယုန်စနစ်များ, MAC-Lab မှ, နေရောင်ခြည် 9500, 8000. နေရောင်ခြည် 3000 နေရောင်ခြည်, ဓါတ်ရထား 100,
ဓါတ်ရထား 200, ဓါတ်ရထား 300, ဓါတ်ရထား 400, ဓါတ်ရထား 500, ဓါတ်ရထား 600 , ဓါတ်ရထား 800, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးစနစ်များ; 9ft ECG နှာမောင်း Cable ကို, 5Ld, အေ့ဟေ, (IEC), VS စတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်က Round 10J> VS 5LD မျှခုခံ, 0.156KG, Cool Gray, TPU, 1pc / အိတ်
EDG073-3AI ဖိလိပ္ပုသည် M3000A, M3001A, M1001A / B, M1002A / B, 78352C, 78354C; ECG နှာမောင်း Cable ကို, 3Ld, 9ft, IEC / AAMI, က Round 12p> 3-ld, 1KΩခုခံ, 0.14KG, Cool Gray, TPU, Philips က LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1669A 1pc / အိတ်
EDG040C5A ဖိလိပ္ပုသည် M3000A, M3001A, M1001A / B, M1002A / B, 78352C, 78354C ECG ခဲဝါယာကြိုးများ, 5LD: AA ကို, 40, အေ့ဟေ, 0.1KG, Cool Gray, TPU, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: ။ M1968A 1pc / အိတ်
EDG040C3A ဖိလိပ္ပုသည် M3000A, M3001A, M1001A / B, M1002A / B, 78352C, 78354C ECG ခဲဝါယာကြိုးများ, 3LD: AA ကို, 40, အေ့ဟေ, 0.131KG, Cool Gray, TPU, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: ။ M1623A 1pc / အိတ်
ED040C5A ဖိလိပ္ပုက, အားလုံး AA ကို-Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ECG ဝါယာကြိုးများစေသော; 5LD: AA ကို; 40 .; ထမ်းဘိုးကိုထမ်းအမျိုးအစား: AA ကိုစတိုင်; အေ့ဟေ, 0.131KG; cool Grey က; TPU; မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1623A 1pc / အိတ်
ED040C3A ဖိလိပ္ပုက, အားလုံး AA ကို-Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ECG ဝါယာကြိုးများစေသော; 3LD: AA ကို; 40 .; ထမ်းဘိုးကိုထမ်းအမျိုးအစား: AA ကိုစတိုင်; အေ့ဟေ, 0.061KG; cool Grey က; TPU; မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1603A 1pc / အိတ်
ED035-5A 8-pin connector နှင့်အတူ Philips ကတူရိယာ: 78208A, 78210A.78330A,
78331 တစ်ဦးက, 78332A, 78333A, 78341A, 7834 2A, 78345A.78346A, 78351T,
783 52A, 78353A, 78354A, 78532A / B, 78534A / B, A / C, M1722A / B, M3500B; ECG နှာမောင်း Cable ကို, 5Ld, 9ft, အေ့ဟေ, က Round 8p> AA ကို-5LD, 1KΩခုခံ, TPU, 0.2KG, Cool Gray, AA ကိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1600A 1pc / အိတ်
ED035-3A 8-pin connector နှင့်အတူ Philips ကတူရိယာ:
77000AC, 77020A / AC အ, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A,
78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A / B က, 78354A,
78532A / B, 78534A / B, A / C, M1722A / B, M1723A / B, Insight web studio ၏။ ECG နှာမောင်း Cable ကို, 3Ld, 9ft, အေ့ဟေ, က Round 8p> AA ကို-3LD, TPU, 1KΩခုခံ, AA ကိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် 0,1742 ကီလိုဂရမ်, Cool Grey က, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1580A 1pc / အိတ်
ED023-5A ဖိလိပ္ပုသည် 78352C, 7834C, 78834C, M1001A / B, M1002A / B,
M1722A / B, M1723A / B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A, VM4 / V24; 5Ld ECG နှာမောင်း Cable ကို, 9ft, အေ့ဟေ, က Round 12p> AA ကို-5LD, 1KΩခုခံ, 0.2KG, Cool Gray, TPU, AA ကိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1520A 1pc / အိတ်
ED023-3A ဖိလိပ္ပုသည် 78352C, 7834C, 78834C, M1001A / B, M1002A / B,
M1722A / B, M1723A / B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A, VM4 / V24; AA ကိုစတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် 3Ld လူနာ Cable ကို, 9ft, အေ့ဟေ, က Round 12p> AA ကို-3LD, 1KΩခုခံ, 0.172KG, Cool Gray, TPU, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: M1500A 1pc / အိတ်
EC040S5A ပုံမှန် 1.5 စတိုင် din; Biosys, ကို Creative, Datascope, ဟွန်း Kohden,
AIR SHIELDS (မူးယစ်, Vickers), ATL, ultrasound;
အားလုံးဒင်-Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ECG ဝါယာကြိုးများစေသော, 40 ခုနှစ်တွင် (102 စင်တီမီတာ), 5-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Snap, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ ဒင်စတိုင်, 0.028KG, Cool Grey က 1pc / အိတ်
EC040S3A ပုံမှန် 1.5 စတိုင် din; Biosys, ကို Creative, Datascope, ဟွန်း Kohden,
အားလုံးဒင်-Plug စနစ်များအတွက်သင့်လျော်သော ECG ဝါယာကြိုးများစေသော, 40 ခုနှစ်တွင် (102 စင်တီမီတာ), 3-ld, အေ့ဟေ (AAMI), Snap, TPU, Yoke အမျိုးအစား: ။ ဒင်စတိုင်, 0.0246KG, Cool Grey က 1pc / အိတ်
EC020-5AI စတိုင်ပုံမှန် din; AIR SHIELDS (မူးယစ်, Vickers): HRRM-71-1 / 2,
Porta- Fib I, II, III ကို, System ကို5(အသစ်), System ကို6(မွေးကင်းစကလေး); ATL ultrasound: 800,
800 Plus အား, Apogee, CX ATL ultrasound: CX200, CX400, HDI 9/2000, Interspec; 9ft 5Ld ECG နှာမောင်း Cable ကို, Din, အေ့ဟေ / IEC, ဖြောင့် 6pin> ဒင် 5J, TPU မျှခုခံ, ဒင်စတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်, 0.132KG, Cool Gray, မူရင်းမော်ဒယ်အမှတ်: D-1540 1pc / အိတ်
EC020-3AI စတိုင်ပုံမှန် din; AIR SHIELDS (မူးယစ်, Vickers):
HRRM-71-1 / 2, Porta- Fib I, II, III ကို, System ကို5(အသစ်),
System ကို6(မွေးကင်းစကလေး); ATL ultrasound: 800, 800
Plus အား, Apogee, CX ATL ultrasound: CX200, CX400,
HDI 9/2000, Interspec; 9ft 3Ld ECG နှာမောင်း Cable ကို, Din, အေ့ဟေ / IEC, ဖြောင့် 6pin> ဒင် 3J, TPU မျှခုခံ, ဒင်စတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန်, 0.131KG, Cool GreyOriginal မော်ဒယ်အမှတ်: D-1340 1pc / အိတ်
EC020-3AI AIR SHIELDS (မူးယစ်, Vickers): HRRM-71-1 / 2,
Porta-Fib I, II, III ကို, System ကို5(အသစ်), System ကို 6
(မွေးကင်းစကလေး); ATL ultrasound: 800.800 Plus အား, Apogee,
Interspec; 3Ld လူနာ Cable ကို Din, 9ft အေ့ဟေ / IEC, ဖြောင့် 6pin> ဒင် 3J မျှခုခံ, ဒင်စတိုင် LeadWires ဘို့မထိုက်မတန် -
ယခင်: လက်-ကျင်းပ Multi-ဓါတ်ငွေ့ Analyzer
နောက်တစ်ခု: ပြန်သုံးနိုင်သော SpO2 အာရုံခံ (Ext-cable ကိုလိုအပ်ပါတယ်)
တစ်ခါသုံး ECG ခဲဝါယာကြိုး
Holter ECG ခဲဝါယာကြိုး
one-လိုင်းစီးရီး ECG ခဲဝါယာကြိုး
one-Piece စီးရီး ECG ခဲဝါယာကြိုး
ပြန်သုံးနိုင်သော ECG ခဲဝါယာကြိုး
Medlinket NIHONKOHDEN သဟဇာတဖြစ်သောတိုက်ရိုက် - ချိတ်ဆက်မှု ...
Medlinket BIONETKOREA / MEK သဟဇာတဖြစ်သောတိုက်ရိုက် -con ...
Radiotransparent Leadwires (ဘန်ဝစ်)
Medlinket Philips နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ Direct-Connect ECG ...
မွေးကင်းစကလေးသူငယ် DIN အမျိုးအစား ECG ခဲဝါယာကြိုးများ EC024M3A